Ekuhlanganisweni kobusuku kwe-Ubuntu 20.10 usungavele uzame isifaki esisha | Kusuka kuLinux
Muva nje imininingwane ngezinguquko ikhishwe okwenziwe ngaphakathi kwe- ebusuku Ubuntu buyakha 21.10, lapho ukuhlolwa kwesifaki sesistimu entsha sekuqalile.
Lesi sifaki esisha isetshenziswa njenge-plugin ngaphezulu kwesifaki sezinga eliphansi le-curtin, esivele isetshenziswa kwisifaki se-Subiquity esisetshenziswe ngokuzenzakalela ku-Ubuntu Server. Isifaki esisha se-Ubuntu Desktop sibhalwe ku-Dart futhi sisebenzisa uhlaka lwe-Flutter ukwakha isikhombimsebenzisi somsebenzisi.
Kumele sikukhumbule lokho ekuqaleni kukaFebhuwari UMartin Wimpress walo nyaka (owayengumqondisi wezokuthuthukiswa kwedeskithophu eCanonical), umemezele ukuthuthukiswa kwesifaki esisha Okwe-Ubuntu Desktop 21.10, lokhu kususelwa esimweni sokuthi isifaki se-Ubiquity sakhiwa ngo-2006 asikaze senziwe eminyakeni embalwa edlule.
Ukuba khona kwezifaki ezimbili ezihlukene kuyinkimbinkimbi yokugcinwa kwathiwa kungenzeka ukudala ukudideka phakathi kwabasebenzisi, ngakho-ke kwathathwa isinqumo sokuhlanganisa intuthuko futhi ulungiselele isifaki esisha esikhundleni se-Ubiquity engasasebenzi, esakhiwe ngokujwayelekile nge-Subiquity futhi sisebenzisa inqubo efanayo yokufaka kuzo zombili iseva nedeskithophu.
Kwashiwo lokho isisusa esiyinhloko ukudala isifaki esisha kuzovumela futhi dlulisa umuzwa omuhle kakhulu kusuka ezinhlelweni ezikhona zokufaka futhi usebenzise ukusebenza, kucatshangelwa izifiso zezigaba ezahlukahlukene zabasebenzisi, ngaphezu kokuthuthukisa isifaki esisha kungenza kube lula ukugcinwa ngokusebenzisa uhlaka olujwayelekile isikhombimsebenzisi sokufaka esiphansi futhi esihlanganisa izinhlelo zeseva nedeskithophu. Njengamanje, ukuba nezifaki ezimbili ezihlukile kudala umsebenzi owengeziwe futhi kudala ukudideka kwabasebenzisi.
Uhlobo olusebenzayo lwesifaki esisha manje luyatholakala Ilungiselelwe yiCanonical Design Team neThimba le-Ubuntu Desktop.
Mayelana nesifaki esisha se-Ubuntu
Isifaki esisha i-plugin yamakhethini esebenzisa uhlaka lwe-Flutter yesixhumi esibonakalayo somsebenzisi, sikuvumela ukuthi wakhe izinhlelo zokusebenza zomhlaba wonke ezisebenza kuzingxenyekazi ezahlukahlukene. Ikhodi yegobolondo yokufaka ibhalwe ku-Dart (uma kuqhathaniswa, i-Ubiquity ne-Subiquity ibhalwe ePython).
Lapho sihlola isifaki esisha siyabona ukuthi sakhiwe nge-Ubuntu desktop yanamuhla engqondweni futhi yenzelwe ukuhlinzeka inqubo yokufaka engaguquki kuwo wonke umugqa womkhiqizo we-Ubuntu.
Kunikezwa izindlela ezintathu:
"Lungisa ukufaka" ukufaka wonke amaphakheji atholakala kusistimu ngaphandle kokushintsha izilungiselelo
"Zama Ubuntu" ukuze uzijwayeze ikhithi yokusabalalisa kumodi ebukhoma
"Faka Ubuntu" ukufaka ikhithi yokusabalalisa kudiski.
Izici ezintsha zifaka ikhono lokukhetha phakathi kwamatimu amnyama nokukhanya, ukusekelwa kokukhubaza imodi ye-Intel RST (Rapid Storage Technology) lapho ifakwa ngokufana neWindows kanye nesixhumi esibonakalayo esisha ukusiza umsebenzisi ukudala nokuphatha ukwahlukaniswa kwediski.
Ngaphezu kwalokho, izinketho zokufaka ezitholakalayo kuze kube manje ziyancishiselwa ekukhetheni phakathi kwesethi ejwayelekile kanye nokukhethwa kokufakwa okuncane kwamaphakeji, kuyilapho kuyingxenye yemisebenzi eseyishiwo futhi engakaqaliswa, ukufakwa kokubethela ukwahlukanisa nokukhethwa kwendawo yesikhathi.
Ekugcineni, kubalulekile ukukhumbula ukuthi inguqulo entsha ye-Ubuntu 21.10 (Impish Indri) Kulindeleke ukuthi yethulwe ngo-Okthoba 14 walo nyaka ngo-2021 futhi kuzoba ukukhishwa kokuqala kwe-Ubuntu ngochungechunge lwakamuva lwezindawo zedeskithophu ze-GNOME 41, ngaphezu kweqiniso lokuthi i-kernel le nguqulo ezofika ngayo kulindeleke ukuthi ibe yi-Linux kernel 5.14 elandelayo, futhi izohambisana ne-GCC 11 futhi I-LLVM 13 njengokujwayelekile, lokhu ngaphandle kokungakunaki ukuthi Ubuntu 21.10 izosebenzisa isifaki se-Ubiquity samanje njengesifaki esizenzakalelayo.
Kulabo abanentshisekelo yokufunda ngokuthuthuka kwesifaki esisha, bangaxhumana nabo bobabili imininingwane efana nekhodi yakho kusixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Ekuhlanganisweni kobusuku kwe-Ubuntu 20.10 usungavele uzame isifaki esisha